उमालेको तरकारी खानाले के हुन्छ ? तपाईँलाई थाहा छ ? | NepalDainik
उमालेको तरकारी खानाले के हुन्छ ? तपाईँलाई थाहा छ ?
तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि तरकारी धेरै नै फाइदाजनक हुन्छ भनेर हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । तरकारीमा भिटामिन, प्रोटीन र अन्य पोषक तत्वहरु पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । साथै यसमा पोटाशियम र फाइबर पनि भरपूर मात्रामा पाइन्छ । उसो त हामीले प्रायः जसो तरकारीलाई भुटेर मसाला राखेर पकाउने अनि खाने गर्छौ भने कसै कसैले सलादको रुपमा पनि खाने गर्छन् । तर, तरकारीलाई उमालेर खाने हो भने त्यसबाट हामीलाई कस्तो फाइदा हुन्छ भनेर खासै ध्यान दिदैनौँ । किनकी उमालेको तरकारीको स्वाद नै हुन्न । तर, उमालेको तरकारी खानाले हाम्रो शरीरलाई भरपूर पौष्टिक तत्व प्राप्त हुन्छ । आज हामी तपाईँलाई तरकारी उमालेर खानाले कस्तो फाइदा हुन्छ , त्यसबारे जानकारी दिदैछौ ।
उमालेको तरकारी किन खाने ?
उमालेको तरकारी खानु पर्छ सुनेर नै तपाईँको मन खिन्न हुन्छ । किनकी उमालेको तरकारीको स्वाद मसाला हालेर बनाएको तरकारी भन्दा फरक हुन्छ । तर, उमालेको तरकारीले तपाईँको इम्यूनिटीलाई बलियो बनाउँछ, जसले तपाईँ विभिन्न प्रकारका रोगबाट बच्न सक्नु हुन्छ । साथै उमालेको तरकारी खानु सुरक्षीत पनि हो । किनकी उमालेको तरकारीको पोषक तत्व नष्ट हुँदैन र यसमा कुनै पनि प्रकारका ब्याक्टेरिया वा किटाणु छ भने त्यो नष्ट हुन्छ । त्यसबाहेक उमालेको तरकारी खानाले तौल कम गर्नमा मद्द पुग्छ । उमालेको तरकारीमा तपाईँले स्वाद अनुसारको नुन र मरिचको धुलो राखेर खान सक्नु हुन्छ ।
सिमी सिमीमा फाइबर, क्याल्शियम, फस्फोरस, सोडियम, फोलेट्स, फोटो न्यूट्रिएन्ट्स, भिटामिन अन्य पोषक तत्वहरु पाइन्छ । यदि सिमीलाई उमालेर खाने बानी बसाल्यौँ भने यसमा भएको पोषक तत्वहरु तपाईँको शरीरलाई प्राप्त हुन्छ । उमालेको सिमी मधुमेह रोगीका लागि सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ । सिमीलाई उमाल्दा ५ देखि ६ मिनेट सम्म उमाल्नु पर्छ, त्यसपछि यसमा स्वादा अनुसार नुन र मरिचको धुलो मिसाएर खानु पर्छ । चुकन्दर सामान्यतया चुकन्दरलाई सलादको रुपमा खाने गरिन्छ । रगतको कमी र महिनावारीको समस्याबाट बच्नका लागि एउटा चुकंदरलाई उमालेर खाने । तर, चुकन्दर उमाल्दा ३ मिनेट सम्म मात्रै उमाल्ने । आलू तपाईँ आलु जुन सुकै बेला खानु हुन्छ भने त्यसलाई उमालेर मात्र खानुस् । किनकी उमालेको आलूमा क्यालोरीको मात्रा कम हुन्छ । खाना पकाउने विधिले पनि तरकारीको पोषक तत्व नष्ट हुन्छ । कुनैपनि तरकारीलाई उमालेर खानाले त्यसमा भएको पोषक तत्व रहिरहन्छ । त्यसैले सँधै उमालेर नै तरकारी खाने बानी बसाल्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
No Comment to " उमालेको तरकारी खानाले के हुन्छ ? तपाईँलाई थाहा छ ? "